सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटे गौतम - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अमेरिकी शहरहरुमा घरबार बिहिनको सङ्ख्या १७ वर्ष यताकै उच्च
बेलायतका शाही परिवारको घुमफिर(फोटोफिचर)
बम बनाउने क्रममा पर्वतमा दुई युवा घाइते
घुँडामुनि गोली हानेर ‘काले’लाई नियन्त्रण लिइयो
मेस्सीको छैठौं पीचीची अवार्ड, को-को छन् सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा ?
सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटे गौतम
शुक्रबार, अशोज २६, २०७५
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाका नेता वामदेव गौतम काठमाडौं ७ मा उपनिर्वाचनमार्फत चुनाव जितेर सांसद बन्ने योजनाबाट तत्कालका लागि पछि हटेका छन् । पार्टीभित्रैको तीव्र विरोध र क्षेत्रका स्थानीय नेता एवं सर्वसाधारणबाट समेत व्यापक आलोचना भएपछि गौतम तत्कालका लागि पछि हटेका हुन् ।
उनले बिहीबार स्थानीय नेताहरूलाई अब आफू तत्कालका लागि सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटेको सन्देश पठाएका छन् । स्थानीय जनमत र पार्टीभित्रको अवस्थालगायतको कारण देखाउँदै उनले तत्काल सांसद बन्ने दिशामा नलाग्ने उल्लेख गरेको स्थानीय नेताले जानकारी दिए । ‘अहिलेको परिस्थिति र प्रतिक्रिया सुन्दा निर्वाचनमा सहभागी हुनेजस्तो वातावरण देखिएन,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै काठमाडौं ७ का ती नेताले भने ।
स्थानीय नेता र काठमाडौंबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरूले बिहीबार गौतमलाई भेटेर छलफल गर्न खोजेका थिए । तर भेट्नका लागि आग्रह गर्नेलाई उनले तत्काल आफू त्यहाँ चुनाव लड्न नआउने जानकारी गराएका थिए ।
तर गौतमकै विषयमा बिहीबार काठमाडौंका प्रदेशसभा सदस्यहरूको भेला भएको थियो । भेलामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । ‘हामीले अहिले स्थानीय वस्तुस्थिति बुझा चुनाव गर्नेजस्तो देखिएको छैन,’ काठमाडौं ७ बाट प्रदेशमा निर्वाचित प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘यही अवस्थाबारे पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराउने छौं ।’ चुनावको एक वर्ष नहुँदै उपचुनाव गर्नु जनमतको पनि विपक्षमा हुने श्रेष्ठले बताए ।
पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रको बिहीबारै बसेको जिल्ला कमिटीको बैठकले पनि चुनावको अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो । राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका सांसद मानन्धरलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
‘अहिलेको सन्दर्भमा मुलुकमा चुनाव गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन,’ तत्कालीन एमालेका काठमाडौं अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्ण राईले भने, ‘रामवीर मानन्धरलाई पनि पार्टीमा दिएको राजीनामा फिर्ता गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौं ।’
बुधबार काठमाडौं ७ का प्रदेशसभा सदस्य वसन्त मानन्धर, प्रकाश श्रेष्ठ र पार्टी अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गौतमका लागि अवस्था प्रतिकूल रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
सांसद मानन्धरले नेता गौतमका लागि भन्दै गत सोमबार पार्टी सचिवालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीले स्वीकृति दिएपछि सांसद पद छोड्ने बताएका थिए । त्यसपछि नेता गौतमको चुनावमा उठ्ने कुराको व्यापक विरोध भएको हो । गौतमको चर्चा चलेपछि पार्टीले स्थानीय वस्तुस्थितिको समेत आकलन भयो । स्थानीय नेताहरू नै विपक्षमा उभिएपछि गौतमका लागि अवस्था प्रतिकूल बन्यो ।
पार्टी केन्द्रमा पनि गौतमको विषय विवादित बनेको छ । नेताहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावलमात्र होइन, गौतमसँग निकट मानिएका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यो निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन् । पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक रूपमै गौतम अब चुनावमा उठ्न नहुने बताएका छन् ।
गत सोमबारको बैठकमा अकस्मात् मानन्धरको राजीनामापत्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातबाट आएपछि अन्य नेताहरू पनि आश्चर्यमा परेका थिए । स्रोतका अनुसार गौतमलाई सांसद बनाउने विषयमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विरोधमा जान नसक्ने अवस्था थियो । त्यसैले अर्को बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेर त्यो पत्र थाती राखियो ।
सचिवालयको बैठक बुधबारका लागि बोलाइयो । तर मंगलबार गौतम उपचुनावमा उठ्ने भनेर सार्वजनिक समाचार र मानन्धरको पत्रकार सम्मेलनले पार्टीभित्र र बाहिर तरंग ल्यायो । सबै क्षेत्रबाट विरोध हुन थाल्यो । त्यसैले पार्टीले बुधबारका लागि निर्धारित सचिवालयको बैठक पनि कात्तिक ४ सम्मका लागि पर सारेको छ । तत्काल बैठक गर्दा गौतमको विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अध्यक्ष ओलीको चाहनामा बैठक पर सारिएको नेकपाका नेताले जनाए । कान्तिपुरबाट
एजेन्सी । सयुंक्त राज्य अमेरिकामा घरबार बिहिन मानि...
एजेन्सी । केंसीन्गटन दरबारले सामाजिक सञ्जालको उपय...
काठमाडौं । बम बनाउने क्रममा पर्वतमा दुई युवा घाइते...
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखामा प्रहरीले डकैती घटनामा...
जकारान्डा कि शिरीषको फुल ?
काठमाडौं । वसन्त आगमनसँगै काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउन लागिपर्छ । प्लास्टिक, धुलो, ध...
राजतन्त्र विरुद्ध जनसंघर्ष चलाउने परशुराम !
हिन्दु मान्यता अनुसार भगवान विष्णुको छैटौं अवतार परशुराम माता-पिता भक्त थिए । अक...
दवाबमा ल्याइएको लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम !
गत शुक्रबार सरकारले ०७६ /०७७ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा राष्ट्रपति मार्फ...
राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण (फोटो फिचर)
काठमाडौं । २०७६ साल बैशाख ११ गते बुधबारका दिन राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा मित्रराष्...
प्रवेश परीक्षा बिना भर्नाको माग गर्दै ल क्याम्पसमा तालाबन्दी
काठमाडौं । प्रवेश परीक्षा बिना भर्नाको माग गर्दै पाँच विद्यार्थी संगठनले नेपाल ल...
मदन भण्डारीलाई सम्झदा
हरेक वर्षको जेठ ३ गते नेपालीहरुले एउटा व्यक्तित्वलाई झलझली स्मरण गर्दछन् । उक्त...
अत्याधिक सेक्सी भएको भन्दै नायिकाका माथि सरकारको प्रतिबन्ध !
एजेन्सी । सुन्दरता चर्चा जहाँ पनि हुन्छ । सुन्दर देखिने चाहना जसलाई पनि हुन्छ । ...
अफगानी पत्रकारको दिनदहाडै गोली हानी हत्या
एजेन्सी । टेलिभिजन प्रस्तोताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी अफगानी पत्रकार मिना मंग...
काउन्सिलले सोध्यो एभिन्युजलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले एभिन्युज टेलिभिजनसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । ...
नेकपामा भागबण्डा टुङ्गियो, बेरोजगार नेताले पाए काम
काठमाण्डौं । ६०- ४० को जगमा वाम गठबन्धन बनाउँदै निर्वाचनमा होमिएको दुई ठूला कम्...